Mpampianatra mitokona : Alefa any amin’ireo toerana banga rehefa vonona hampianatra -
AccueilSongandinaMpampianatra mitokona : Alefa any amin’ireo toerana banga rehefa vonona hampianatra
02/06/2018 admintriatra Songandina 0
“Tsy misy ny taona fotsy. Tsy mihemotra ny fanadinam-panjakana.” Io no nambaran’ny minisitra Andriniaina Rabary Paul, raha nitafa tamin’ny mpanao gazety omaly teny amin’ny biraony Anosy. Hentitra ny tenany raha nilaza fa tsy manery izay tsy hampianatra ny tenany fa kosa aza kotabaisina izay te-hampianatra. Tsy maintsy handray andraikitra ihany koa manoloana ireo tsy hampianatra, satria ampy izay fotoana nanginany izay, hoy izy. “Navelako niteny izy ireo tao anatin’ny iray volana satria azo ekena ilay fangatahana. Marary azy ny karamany ambany ka mba aleo ho henon’ny olona. Fa izao kosa, tsy hangina intsony aho ka haka ny andraikitra ho an’izay tsy hampianatra. Mandray karama daholo fa tsy tapaka ny karaman’ireo mpitokona. Fa kosa mikisika izy ireo mba hampidirana ireo mpampianatra vaovao”, hoy ny nambaran’ny minisitra Rabary Paul.
Izany hoe, alefa any amin’ireo toerana banga manerana ny Nosy ireo mpampianatra mitokona ireo rehefa vonona hampianatra amin’izay izy fa ilay toerana eto an-drenivohitra kosa omena ireo mpampianatra vaovao satria ny fiverenena an-tsekoly no andrasan’ireo ray aman-dreny. Miisa 2 000 ireo efa vonona horaisina mpampianatra, araka ny fanamarihana. Tsara ho fantatra fa, “ny ray aman-drenin’ny mpianatra no mampandeha ny sekoly. 6 Tapitrisa Ariary no omen’ny fanjakana ny lisea fa 80 tapitrisa Ariary kosa omen’ny ray aman-dreny, toa ny lisea LARA ao Antsirabe. Noho izany, mila mpampianatra vonona hampianatra ny firenena fa tsy ireo manao sorona ny mpianatra nefa mbola ny ray aman-drenin’ny mpianatra avokoa no miantoka ny rehetra. Raha taona fotsy ity taona ity, tsy ny sendika mihitsy no jeren’ny olona fa ny minisitera.”
Nilaza ihany koa ny minisitra fa efa mivoatra be ny fitakian’ireo sendikan’ny mpampianatra. Raha niatomboka tamin’ny fampakarana ny karamany ho 100 isan-jato sy ny famerenana ho 10 000 ireo mpampianatra horaisina mpiasam-panjakana dia efa lasa fitakiana ny fialan’ny minisitra ankehitriny izany. Ity farany izay nilaza fa vonona ny tsy ho minisitra intsony ho tombontsoan’ny zaza malagasy, raha izay no hampiverina ireto mpampianatra ireto an-tsekoly handray ny asany ka hampandeha indray ny asa fampianarana. Fa nomarihiny kosa, tsy izay akory no hampakatra 100 isan-jato ny karaman’ireo mpampianatra.